High Quality mmiri washers Manufacturer na Supplier | Yanzhao
Mmiri na-asa mmiri bụ helix n'aka ekpe ma kwe ka eriri ahụ ga-esi ike n'akụkụ aka nri naanị ya, ntụgharị ntụgharị klọọkụ. Mgbe etinyere aka na-atụgharị aka na aka ekpe, ihu a na-eweli elu na-ata ata n’okpuru mkpọchi ahụ ma ọ bụ akụ na akụkụ ya, wee si otú a na-eguzogide ịtụgharị. Ya mere, akwa mmiri na-adịghị arụ ọrụ na eri aka ekpe na ebe siri ike. Ọzọkwa, a gaghị eji ha na akwa akwa dị larịị n'okpuru akwa mmiri, n'ihi na nke a na-ewepu mmiri nke mmiri site na ịtinye n'ime ihe ga-emegide ntụgharị.
Uru nke ndị na-ekpochi mmiri na-ezo na trapezoidal nke washer. Mgbe abịakọrọ ibu dị nso na ihe akaebe nke ike nke bolt ahụ, ọ ga-agbagọ ma dọọ. Nke a na-ebelata oge opupu ihe ubi nke nkwonkwo akpọchiri nke na-enye ya ohere ijigide ike n'okpuru otu ọkwa vibration ahụ. Nke a na-egbochi ịtọghe.
Ihe nhicha mmiri na-egbochi mkpụrụ na bolts ịtụgharị, na-amị amị ma na-atọpụ n'ihi ịma jijiji na torque. Igwe mmiri mmiri dị iche iche na-arụ ọrụ a n'ụzọ dịtụ iche, mana echiche bụ isi bụ ijide akụ na bootu. Fọdụ ndị na-ehichapụ mmiri na-arụ ọrụ a site na ịba ụta n'ime ihe ndị bụ isi (bolt) na akụ na njedebe ha.
A na-ejikarị ndị na-asa mmiri eme ihe na ngwa metụtara vibration na slippage nwere ike ịdị nke ihe nkedo. Industlọ ọrụ ndị na-ejikarị akwa mmiri eme ihe metụtara njem (ụgbọ ala, ụgbọ elu, mmiri). A pụkwara iji mmiri na-asa mmiri na ngwa ụlọ dịka ndị na-arụ ụgbọelu na ndị na-asa akwa (igwe na-asacha ya).
d Nkeji 2.1 Ugboro abụọ 3.1 4.1 5.1 6.2 8.2 10.2 12.3 Ezigbo udo
Max 2.3 Ugboro abụọ 3.3 4.4 5.4 6.7 8.7 10.7 12.8 Ugboro 14.9
h 公公 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2,5 3 3.5 4
Nkeji 0,52 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 2.35 Ugboro abụọ 3.3 3.8
Max 0.68 0.9 1.1 1.3 1.7 2.1 Ugboro abụọ 3.15 3.7 4.2
n Nkeji 0,52 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 2.35 Ugboro abụọ 3.3 3.8
H Nkeji 1.2 1.6 2 2.4 3.2 4 5 6 7 8
Max 1.5 2.1 Ugboro abụọ 3 4 5 6.5 8 9 10.5
Ibu ibu≈n'arọ 0.023 0.053 0.097 0.82 0.406 0.745 Ogbe 1.53 Ugboro abụọ 4,63 6.85
d Nkeji 16.3 18.3 Okpoko 20.5 Ogbe 22.5 24.5 Ogbe 27.5 30.5 36.6 42.6 49
Max 16.9 Udo 19.1 21.3 23.3 25.5 28.5 31.5 37.8 43.8 50.2
h 公公 4 4.5 5 5 6 6 6.5 7 8 9
Nkeji 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.2 6.7 7.7 8.7
n Nkeji 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.2 6.7 7.7 8.7
H Nkeji 8 9 10 10 12 12 13 14 16 18
Max 10.5 Ugboro 11.5 13 13 15 15 17 18 21 23
Ibu ibu≈n'arọ 7.75 11 15.2 16.5 26.2 28.2 37.6 51.8 Ogbe 78.7 114
Nke gara aga: Ewepụghị Washers
Osote: Anabata-Na arịlịka
6mm Mmiri mmiri
Ugboro abụọ Coil Spring Washers
Din6921 Flange Mkpụrụ, Nnukwu Ike Hex Bolts, Black Oxidation Hex mkpọchi, Hegzagon Socket Head mkpọchi, Nwa mkpuchi Hex Mkpọchi, Mkpọchi,